“တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ရပ်တည်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိဘူးဆိုရင် ကျမတို့မျှော်မှန်းပြီး တိုက်ပွဲဝင်လာတာ အလကားဖြစ်သွားနိုင်တယ်” နော်စီဖိုးရာစိန်နှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် » Myanmar Peace Monitor
“တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ရပ်တည်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိဘူးဆိုရင် ကျမတို့မျှော်မှန်းပြီး တိုက်ပွဲဝင်လာတာ အလကားဖြစ်သွားနိုင်တယ်” နော်စီဖိုးရာစိန်နှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်
KNU Concerned Group ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်နှင့် KNU ဒုဥက္ကဌဟောင်း နော်စီဖိုးရာစိန်နှင့် မွန်သတင်းအေဂျင်စီ (MNA) အယ်ဒီတာ ဗညားအောင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မေး- ကျင်းပပြီးခဲ့တဲ့ (၂၁) ရာစုပင်လုံငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆရာမ ဘယ်လိုသုံးသပ်ချင်ပါသလဲ?
ဖြေ-တတိယအကြိမ် ၂၁ ရာစုပင်လုံ ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံမှာ ထွက်လာတဲ့အဖြေရလဒ်ကတော့ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာကိစ္စတစ်ခုမှမပါခဲ့ဘူးလို့ ပြောလို့ရတယ်၊ ထွက်လာတဲ့အဖြေဆိုရင်လည်း တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် ဘာနိုင်ငံရေးအာမခံချက်မှ မရှိဘူး၊ Process တစ်ခုလုံးပြန်ကြည့်ရင် ညီလာခံမှာဆွေးနွေးတာ ၂ ခါရှိပြီ နိုင်ငံရေးအဖြေထွက်မလာတာကို ကျမတို့ပြန်သုံးသပ်ရင် စစ်တပ်က ဒါကို တားမြစ်တဲ့အပေါ် ခွင့်မပြုတဲ့အပေါ်မှာ ဆွေးနွေးခွင့်မရ ဖြစ်နေတယ်။ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ၂၁ ရာစုပင်လုံကတော့ ဆွေးနွေးရမယ့်နိုင်ငံရေးကဏ္ဍတွေက ရှိတယ်၊ အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် အခုဆွေးနွေးတဲ့ကဏ္ဍ ၅ ခုက ရရှိတဲ့ရလဒ်တွေကလည်း တိုင်းရင်းသားတွေ တကယ်လိုလားတဲ့ နိုင်ငံရေးအရ တောင်းဆိုချက်တွေကို အာမခံချက်မရှိဘူး။ နိုင်ငံရေးကဏ္ဍကိုကြည့်ရင် ကျားမတန်းတူရေးကို ဦးစားပေးပြီးတော့ ဆွေးနွေးတယ်၊ တိုင်းရင်းသားတွေတောင်းဆိုတာက ဒါထက်ပိုတဲ့ နိုင်ငံရေးအာမခံချက်တွေပါ။ နိုင်ငံရေးအနှစ်သာရက ကျားမတန်းတူရေးလို့ ပြောလို့မရပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ကောင်းတာတခုက ကျားမတန်းတူရေး အမျိုးသမီးပါဝင်ရေးကတော့ ဆွေးနွေးရမယ့် လိုအပ်တဲ့အရာတခုဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အခုပြန်ကြည့်ရင် အမျိုးသမီးပါဝင်ရေး အခန်းကဏ္ဍကို ဆွေးနွေးပေမယ့်လည်း ထွက်လာတဲ့အဖြေက အမျိုးသမီးတွေအတွက် အာမခံချက်မရှိဘူး။ ဥပမာ-“ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် အမျိုးသမီးများ အနည်းဆုံး ၃၀% ပါဝင်ရေးကို အားပေးရန်” အဲဒီအားပေးရန် ဆိုတာ အာမခံချက်မရှိဘူး။
မေး- နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ မိန့်ခွန်းတွေအပေါ် ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ?
ဖြေ-ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မိန့်ခွန်းကတော့ရှင်းနေတာပဲနော်၊ သူ့မိန့်ခွန်းအပေါ် ကျမတို့ လက်မခံနိုင်ဘူး။ ဘာဖြစ်သလဲဆိုတော့ သွားနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပုံစံကတော့ ကျမတို့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ နိုင်ငံရေးလိုလားချက်တွေကို သူတို့စစ်တပ်ဘက်က ဖော်ပြတာမရှိဘူး၊ သူတို့ ဖော်ပြတာကတော့ အာဏာ ဆုပ်ကိုင်ထားဖို့အတွက်ပဲ ဖြစ်တယ်။ စစ်တပ်က တစ်နိုင်ငံလုံး ကိုယ်စားပြုတယ်ပြောတာပေါ့၊ ဒါကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူး၊ စစ်တပ်က ကိုယ်စားပြုတာမဟုတ်ဘူး၊ တိုင်းပြည်အတွက် လူထုအတွက်အတွက် ကာကွယ်ဘို့ သူတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်လေ။ အမှန်က စစ်တပ်ဆိုတာ အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာပဲရှိရမယ်၊ ဝန်ထမ်းပဲအဖွဲ့ဖြစ်တာပေါ့လေ။ နောက်တစ်ချက်- သူပြောတာက NCA အတိုင်းပဲသွားရမယ်၊ သူတို့မှာ အင်အားနည်းနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဟာ ခြိမ်းခြောက်မှုလည်းပါတယ်၊ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေနဲ့သွားနေမယ့်အစား ပြဿနာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ၊ စစ်ရေးကိစ္စပြောင်းလဲမှုကို တကယ်လိုလားရင် နည်းလမ်းဘယ်လိုရှာမလဲ၊ အာဏာသုံး လက်နက်ဖိအားသုံးပြီးတော့ ဒီလိုမျိုးပြောမယ်ဆိုရင် ကျမတို့စိုးရိမ်တာက ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်တော့ အများကြီးအဟန့်အတား ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
မေး-NCA သဘောတူညီချက်တွေက ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်နိုင်တယ်လို့ဆိုကြတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကာချုပ်မိန့်ခွန်းအရဆိုရင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံမှာ အခန်း ၁၂ အတိုင်းပဲပြင်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဘယ်လိုပြောချင်လဲ?
ဖြေ-ဒါကရှင်းနေတာပဲလေ၊ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဖို့ သူတို့က လုံးဝမပေးဘူးနော်၊ လမ်းဖွင့်မပေးဘူး၊ အရင်က ထပ်ခါတလဲလဲပြောခဲ့တာရှိတယ်၊ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို စစ်တပ်က အသက်နဲ့လဲပြီး ကာကွယ်မယ် ဆိုတာပဲ၊ အဲဒီဟာက ရှင်းနေတာပဲ၊ ဒီညီလာခံမှာ ထပ်လောင်းပြီးပြောခဲ့တာလည်း ရှင်းနေတာပဲ၊ ဒါပေမယ့် အကန့်အသတ်နဲ့ ပြင်လို့ရတာရှိတယ်၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်မှာ လုပ်ထားတဲ့ပြင်ဆင်ချက်တွေ ရှိတယ်။ အဲဒါက အရေးကြီးတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး တိုင်းရင်းသားတွေမျှော်မှန်းထားတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
မေး- လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း EAOs တို့ကို ဘယ်လိုတိုက်တွန်းချင်သလဲ?
ဖြေ- မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာဟာ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်တယ်၊ တိုင်းရင်းသားတွေ ညီညီညွတ်ညွတ်ရပ်တည်ဖို့လိုတယ်၊ အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း EAOs တို့ ရည်မှန်းချက် မျှော်မှန်းချက်အပေါ် ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်ဖို့လိုတယ်၊ တန်းတူရေးအတွက် အနှစ် ၆၀-၇၀ ကျော်တိုက်ပွဲဝင်လာတာဖြစ်တယ်၊ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ရပ်တည်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာ မရှိဘူးဆိုရင် ကျမတို့မျှော်မှန်းပြီး တိုက်ပွဲဝင်လာတာဟာ အလကားဖြစ်သွားနိုင်တယ်၊ အခုငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် သွားလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီ၊ တိုင်းရင်းသားတွေလိုလားတဲ့ နိုင်ငံရေးပန်းတိုင်ကို သွားလို့မရတဲ့အနေအထား အခြေအနေမှာရှိနေတယ်၊ ဒါကိုပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားသင့်သလဲဆိုတာ ပြန်သုံးသပ်ရမယ်၊ Reduce Setback ဆုတ်ယုတ်မှုတွေကို ဘယ်လိုလျှော့ချမလဲ၊ ကျမဆိုလိုချင်တာက လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖျက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး၊ Setback ကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ၊ စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်း တခုခုမှားခဲ့မယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံး ဘယ်လိုပြုပြင်သွားမလဲ ဆိုတာမျိုးပါ။
အခုဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောတယ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် လည်းပြောတယ် ၂၀၂၀ မတိုင်ခင်မှာ နောက် ၃ ခါလောက်ပဲ ပင်လုံညီလာခံလုပ်မယ်လို့ ဆိုတယ်၊ NCA လက်မှတ်ထိုးခဲ့တာ ၂ နှစ်ခွဲကျော် ၃ နှစ်ပြည်တော့မယ်၊ အခု နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေက ဘာမှအာမခံချက်မရသေးဘူး၊ အခု ဆက်သွားမယ့် ညီလာခံ ၃ ကြိမ်မှာလည်း အရေးကြီးတဲ့ နိုင်ငံရေးလိုလားချက်တွေကို ဆွေးနွေးလို့ရပါ့မလား အဖြေရှာလို့ရပါ့မလား အဲဒါကို စဉ်းစားဘို့လိုတယ်။
မေး-နောက်ဆုံးဖြည့်စွက် ပြောချင်တာလေးရှိရင် ပြောပေးပါလား။
ဖြေ- အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသားEAO တွေပဲဖြစ်ဖြစ် တိုင်းရင်းသားပါတီပဲဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူလူထု၊ လူငယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ် တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လိုလားချက်၊ နိုင်ငံရေးရပ်တည်ချက်၊ နိုင်ငံရေးရပ်တည်ချက်တွေက အားလုံးတစ်ခုတည်းဖြစ်ဘို့ လိုတယ်။ တစ်ခုတည်းဖြစ်ပြီးမှပဲ မြန်မာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာကို ဝိုင်းပြီးတော့ ဖြေရှင်းလို့ရမယ်၊ တိုင်းရင်းသားတွေ သွားရမယ့်လမ်းကတော့ ပြည်သူလူထုတွေလိုချင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးပါပဲ၊ မြန်မာနိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးက အားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်၊ တပ်မတော်တစ်ခုတည်းရဲ့ တာဝန်မဟုတ်ဘူး၊ ပြည်သူလူထုအားလုံးရဲ့ တာဝန်ဖြစ်တယ်၊ ကျမတို့အားလုံး စည်းစည်းလုံးလုံးရှိကြပြီးတော့ နည်းလမ်းရှာဖွေဘို့လိုတယ်လို့ ပြောချင်တယ်။